Nabata na 2009 Marketing Tech Blog | Martech Zone
Y’oburu na ogugu akwukwo nke blog m ogologo oge, o nwere ike ichotala mgbanwe ufodu n’oge na-adịbeghị anya. Anọ m na-arịọ maka enyemaka nke ndị na-ede blọgụ ọhụrụ ma gbanwee blog site na my blọọgụ na anyị blọọgụ. Taa bụ nnukwu usoro ịga n’ihu na atụmatụ ahụ - ị ga - ahụ ugbu a na blọọgụ m nwere isiokwu ọhụrụ!
The pụtara imewe e mepụtara site na otu onye nke anyị nwere, Jon Arnold President nke Otu nkuzi. Ọ rụrụ ọrụ mara mma nke na-ejide njirimara nke blọọgụ. Ga-achọpụta na Ibe akwukwo bu ihe ohuru - na edeputa ndi obula anyi na ede blọgụ anyi tinyekwara ihe jikọrọ ha na ihe banyere ndu ha nke n’enye ha ihe omuma banyere oru ha na oru ha.
Aga m abụ onye mbu blogger na Blog mana ị gha ahụ onye ọ bụla n’ime ndị ọzọ na-ede blọgụ na-eziga 2 ma ọ bụ 3 ugboro n’ọnwa. Ebumnuche bụ inye ndị na - agụ akwụkwọ anyị nhọrọ dị mma nke ihe bara uru ndụmọdụ ahia. Ma ị bụ onye nrụpụta na-arụ ọrụ na nsogbu CSS ma ọ bụ CMO na-anwa ikpebi nke ọzọ nchịkọta ngwugwu itinye ego na - anyị ga-aga n'ihu na-enye ozi bara uru.
Enwere blọọgụ ahịa ndị ọzọ n'ebe ahụ (M na-eso ha niile!)… Ụfọdụ bụ maka ịme ego na ntanetị, ụfọdụ bụ maka ịdebe ozi ahịa, ndị ọzọ ga-ere ozi ogbako na akwụkwọ akụkọ. Imirikiti dị niche ma ọ bụ ozi ọma. Ebumnuche anyị bụ ịbụ blọọgụ goto maka ndị ahịa iji melite mbọ ahịa ha ma nweta nloghachi kacha mma maka mbọ ha. Anyị achọghị ụbọchị gafere ebe ị na-ahapụghị ozi ndị ọzọ iji gbalite azụmahịa gị ma ọ bụ rụọ ọrụ gị nke ọma! Oge.
Banyere onye na-ese foto anyị
N'ime saịtị ahụ niile, ị ga - ahụ foto mara mma nke ndị na - ede blọgụ anyị Indianapolis na-ese foto Paul D'Andrea site na PDA Photography. Paul guzobere anyị dum oge ịse foto anyị na Andrew Ball nyere anyị ohere ịbanye na ụlọ ngosi ihe nka nkeonwe n’ime AT&T. Ga-ahụ na foto niile anyị nwere nkwurịta okwu akụrụngwa dị n'azụ anyị - isiokwu dị jụụ!
Lorraine na Jon enweghị ike ịme foto otu.
Gịnị bụ Next?
Ọtụtụ ihe na-abịa! Anyị ga-enwe kalenda Ihe Omume (yana ihe omume nke anyị!), Ga-arụ ọrụ nke ọma iji nyefee ọdịnaya dị elu na peeji nke Marketingzụ ahịa nke Indiana, na enwere m obi ike na nzukọ na nzukọ ọmụmụ nke anyị ga-abịa n'oge adịghị anya!
Ọ bụrụ na ị nwere arịrịọ ọ bụla ma ọ bụ chọọ ịbubata isiokwu nke gị - biko pịa n'okpuru bọtịnụ!
Tags: ndị ọkachamara n’ahịa ahịablog teknụzụ ahịausoro mgbasa ozi ohuruisiokwu mkpado
Sep 18, 2009 na 5: 08 AM
Ọdịdị ọhụrụ ahụ dị mma!
Sep 18, 2009 na 4:17 PM
Daalụ Matt! Ọ dị mma ịnụ n'ọnụ gị!
Sep 18, 2009 na 6: 19 AM
M hụrụ ọhụụ ọhụrụ n'anya. Dị ọcha na ọkachamara.
Sep 18, 2009 na 12:37 PM
Ihe ngosi dị egwu! Ezigbo ọrụ nye ndị niile metụtara.
Sep 18, 2009 na 4:16 PM
Daalụ Kyle! Enweela ekele na ị na-ewepụta oge ma na-enye ụfọdụ nzaghachi.
Sep 18, 2009 na 3:46 PM
na-enwe ekele maka ịmalite isiokwu ọhụrụ ahụ. ọ dị oke mma!
Daalụ Jascha! Ọtụtụ ihe ga - abịa na nchịkọta aha!
Sep 18, 2009 na 4:35 PM
Ha gosipụtara saịtị gị na seminar na-ede blọgụ n'ụtụtụ a ma echere m na nwa okorobịa ahụ gara ebe nrụọrụ weebụ na-ezighi ezi! Chaị, mma dị mma.
Sep 18, 2009 na 7:38 PM
Ọdịdị ọhụrụ ahụ dị oke mma! Jon rụrụ ọrụ dị egwu.
Sep 19, 2009 na 6:13 PM
Nnukwu ọhụụ. Ị mere nke ọma!!